စင်ကာပူရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား Special Pass Extension နှင့်ပတ်သက်ပြီး အသိပေးကြေငြာချက် | Myanmar In Singapore
Myanmar nationals hold up their passports outside the embassy of Myanmar in Singapore April 27, 2008. Hundreds of Myanmar nationals gathered outside the embassy in Singapore on Sunday as they waited for their turn to vote in the country’s constitutional referendum. REUTERS/Vivek Prakash (SINGAPORE)
စင်ကာပူတွင် လတ်တလော ဖြစ်ပွာလျှက်ရှိသော Covid-19 Circuit Breaker ကာလအတွင်း Work Pass သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသော မြန်မာအလုပ်သမားများ နှင့် အလည်အပတ်ရောက်ရှိနေရာကနေ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လို့မရတော့သည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် စင်ကာပူနိုင်ငံ မြန်မာသံရုံးမှ ကြေငြာချက်တစ်ခု ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကပ်ရောဂါပိုးအသစ် Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကူးစက်ပြန့်ပွားနေမှုအား ကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက် ကမ္ဘာ့တစ်၀ှမ်းရှိ အစိုးရများက တုံ့ပြန်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများအား အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိရာ၊​ နိုင်ငံတကာခရီးသည်တင် လေကြောင်းခရီးစဉ်များအား မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်ဆင်းသက်ခြင်းကို ယာယီရပ်ဆိုင်းကြောင်း ကြေငြာချက်ကို ၃၀-၄-၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ တိုးမြှင့်သတ်မှတ်လိုက်သည့်အတွက် စင်ကာပူနိုင်ငံရောက် WorK Pass ကိုင်ဆောင်သူ (၎င်းတို့၏ Dependant Pass Holders များအပါအဝင်) မြန်မာနိုင်ငံသားများအနေဖြင့် Work Pass များကို ပယ်ဖျက်ထားပြီး၊ မိမိတို့၏ Special Pass (သို့မဟုတ်) Short-Term Visit Pass သည် (၇)ရက်အတွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်ဆိုပါက မိမိတို့၏ အလုပ်ရှင် (သို့မဟုတ်) အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး အေဂျင်စီများမှတစ်ဆင့် စင်ကာပူနိုင်ငံ၊ လူ့စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန၏ website link ဖြစ်သည့်
သို့ဝင်ရောက်၍ သက်တမ်းတိုး လျှောက်ထားဆောင်ရွက်သွားနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်ဟု ကြေငြာထားသည်။
Tags: Corona Virus covid-19 Myanmar Embassy
စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် လုပ်ငန်းကြီးများ ပြန်လည်စတင်တော့မည် ဖြစ်သောကြောင့် လူစည်ကားသော နေရာများတွင် Trace...
နိုင်ငံတကာတွင် COVID-19 ရောဂါအခြေအနေကို ထိန်းထားနိုင်ခြင်းက နိုင်ငံ၏ဆင်းရဲချမ်းသာခြင်းနှင့် မဆိုင်ဘဲ ပြည်သူများ...
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်စစ်ဆေးခြင်းသည် အမေရိကန်နိုင်ငံရှိလူနာတစ်ဦး၏ ဦးနှောက်အရည်ကို ယိုစိမ့်မှု ဖြစ်စေ
ကလေးအဆိုပြိုင်ပွဲတွေ ကတည်းက ထူးချွန်ခဲ့တဲ့ ပြုံးထက်သာနဲ့ ခဏတာ
စင်္ကာပူနိုင်ငံသို့ မလေးရှားနိုင်ငံမှ လျှပ်စစ်ကို တရားဝင် တင်သွင်း